Suuqa Xoolaha ee Degmada Afgooye ayaa waxaa ka dhacay qarax qasaaro sababay – STAR FM SOMALIA
Suuqa Xoolaha ee Degmada Afgooye ayaa waxaa ka dhacay qarax qasaaro sababay
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha hoose, qarax miino ayaa goor dhaw wuxuu ka dhacay Suuqa Xoolaha Degmada Afgooye.
Qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso, ayaa waxa uu Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamo ka tirsan Dowladda oo lagula eegtay meel ay canshuurta Xoolaha Suuqa Lagu kala iibsado ay ku qaadaan.
Inta la xaqiijiyay hal Askari oo ka tirsanaa ciidanka ku mashquulsanaa qaadista Canshuurta ayaa halkaasi ku geeriyooday Askar kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu xaqiijiyay Guddoomiye ku xigeenka dhanka ammaanka Degmada Afgooye.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka ammaanka Degmada Afgooye Yuusuf Maxamed, ayaa sheegay inay sidoo kale jiraan dhaawacyo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee Suuqa Xoolaha ku sugnaa, balse waxa uu sheegay inuusan hayn tirada dadka shacabka ah ee waxyeelada ay soo gaartay.
Ciidamo ka tirsan Saldhiga Degmada Afgooye ayaa gaaray durba goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana ay meesha ka qaadeen meydka Askariga geeriyooday iyo dhaawaca Askarta kale.
Suuqa Xoolaha ee Degmada Afgooye oo lagu kala yaacay markii uu qaraxa dhacay, ayaa hada xaalada waxa ay tahay mid caadi ku soo noqotay oo dadkii ay si caadi ah u ganacsanayaan.
Al Shabaab ayaa inta badan qaraxyada noocaan oo kale ah la eegta ciidamada Dowladda ee ku sugan Degmada Afgooye.
Kulankii lagu xalin lahaa Mooshinka uu jawaari ku dhawaaqay oo dib u dhac ku yimid